Website of the Year 2009 ကာတွန်း ဘိုဘို၀က်ဆိုက် (http://bobo.6te.net) - MYSTERY ZILLION
Website of the Year 2009 ကာတွန်း ဘိုဘို၀က်ဆိုက် (http://bobo.6te.net)
March 2010 edited January 2011 in IT Debates
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ adminကြီး ကိုစေတန်ကတော့ ဒီလိုဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား
(နည်းပညာဆိုင်ရာ နာမည်ကျော် မြန်မာဘလော့ဂါတဦးဖြစ်သော စေတန်ဂေါ့ဒ် (http://www.saturngod.net) က ယခုဆုရ ကာတွန်း ဆိုက်အပေါ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များအား အသေးစိတ်ဝေဖန်မှုများအပြင် ဆုရွေးချယ်သူများအနေဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မသုံးသပ်ဘူးလား၊ ဂျာနယ်များတွင်ကြော်ငြာပါသည့်အထဲကမှ ရွေးချယ်ခြင်းလား စသဖြင့် ယင်း ဘလော့ဂ်ပေါ် မှ ဝေဖန်ရေးသားထားကြောင်း တွေ့ရသည်။)
မြန်မာ ပြည်တွင်းမှ အမျိုးသမီး ဘလော့ဂါ တဦး ကတော့ဒီလိုပြောပါတယ်
(သူ့ထက် ကောင်းတဲ့ ဆိုက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်၊ ၈ ခုလောက် ၀င်ပြိုင်တဲ့ အထဲကမှ ဟိုအချက် မကိုက်လို့ပယ်၊ ဒီအချက်ကိုက်မှ ပေးဆိုတော့ လွတ်လပ်မှု မရှိဘူးလို့ ထင်တယ်၊ တကယ်တော့ ဆုပေးမယ်ဆိုရင် မဲပေးစနစ်နဲ့ လုပ်ပြီးပေးရင် အဆင်ပြေမယ် လို့ထင်တယ်၊ ကျမတောင် အဲ့ဒီဆိုက်ကို ဆုရမှ ရှိမှန်းသိတယ)
Myanmar ICT Awards 2009 ကျင်းပရေးဆပ်ကော်မတီမှ အဖွဲ့၀င်တဦးဖြစ်သူ ဦးနေထွန်းသိန်းက ရဲ့ဖြေရှင်းချက်လေးကတော့ ဒီလို့ပါ
(ကျနော်တို့က နည်းပညာကောင်းတာတခုတည်းကို ဇောင်းပေးပြီးရွေးလို့မရပါဘူး၊ နည်းပညာဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်း တခြားအချက်တွေမှာအားနည်းနေရင်လည်းမရပါဘူး၊ ၀က်ဘ်ဆိုက် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ကြည့်မယ့်သူ မရှိရင်လည်း အမှတ်ပေးလို့မရပါဘူး၊ သူ့ထက်ကောင်းတဲ့၀က်ဘ်ဆိုက်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်ပွဲမှာ မတင်သွင်းနိုင်ရင်ဘယ်လိုမှ အမှတ်ပေးလို့မရပါဘူး)
(တယောက်တည်းက အမှတ်ပေးလို့လည်း ဘယ်လိုမှ ဆုမရနို်င်ပါဘူး၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ေ၀ဖန်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မရှင်းလင်းတဲ့ သူပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့တပတ်ထဲမှာ ဆုပေးအဖွဲ့ရဲ့ ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ www.myanmarictawards.org ကို၀င်ပြီးတော့ ဆုရတဲ့သူတွေ ဘာကြောင့် ရတယ်ဆိုတာ သုံးသပ် ထားတာတွေကို ပြန်ကြည့်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်)
အကောင်းဆုံး၀က်ဘ်ဆိုက်ဆု ရရှိသွားတဲ့ လောကနတ်စာပေမှ ဦးဇော်၀င်းဦးကလည်း
(ကျနော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ နိုင်ဖို့ လိုအပ်သေးတာတော့ အမှန်ပါပဲ၊ ရှိတာလေးနဲ့ဖြစ်အောင် လှအောင်လုပ်ထားတာပါ၊ ရမယ်လို့လည်းထင်မထားပါဘူး၊ ၀င်ပြိုင် လို့ရတယ်ဆိုလို့ ၀င်ပြိုင်ဖြစ်လိုက်တာပါ)
http://www.irrawaddy.org/bur မှာကူးယူဖော်ပြတာပါ mz member များဝင်ရောင်ဆွေနွေးကျပါအုန်းလို့။
"နည်းပညာဆိုင်ရာ နာမည်ကျော် မြန်မာဘလော့ဂါတဦးဖြစ်သော စေတန်ဂေါ့ဒ်"
So funny sentence .... ROFL... hmm... they wrote... I look like celebrity :113: နောက်ဆိုရင်တော့ ဝေဖန်ရေးကန် တွေကို လျော့မှပဲ။
ကျနော်တိုု့ဒီဘက်မှာ ပြောထားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်..
ဆုုပေးတဲ့အတွက်ကတော့ ဘာမှမပြောလိုုတော့ပါဘူး.. ပြောလည်း ပေးပြီးသားဆုုကိုု ပြန်ပေးလိုု့ရမှာမှမဟုုတ်ပဲ
အဲဒီတော့ နောင် ပေးမယ့်ဆုုတွေအတွက် အကောင်းဖြစ်အောင် ၀ိုုင်း၀န်းပြီး အကြံပေးကြဖိုု့ပဲ ရှိပါတယ်..
အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ .. ကိုုနေထွန်းသိန်းဆိုုတာ မရှိပါဘူး.. ( may be.. it's TYPO , but it's bad :S )
၁) web site of the year, mobile application of the year ဆုတွေအတွက်  မိမိတို့ရဲ့ product, web site များကို ၀င်ရောက်ပါ၀င်ယှဉ်ပြိုင်ကြဖို့  သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ web media ၊ FM radio၊ TV တို့ကနေ  အကြိမ်ကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် form ပုံစံပါ  ဖော်ပြးထားပါတယ်။ ယခုရွေးချယ်သော ဆုများက ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများ  အတွင်းမှသာ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၀င်ရောက်ခြင်းမရှိသော product, website  များ မိုးပျံအောင် ကောင်းနေရင်လဲ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများအရ  လုံး၀ထည့်မစဉ်းစားပါ ခင်ဗျား။
အဲဒီတော့ ကြောင်ရေချိုးတဲ့အလုုပ်များ မလုုပ်စေချင်ပါဘူး..
ပြောချင်တာ ကတော့ sub-domain ကြီးနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လောက်လောက်ကောင်းကော်း မခန့်တော့ဘူးဗျ။MCF ကလူကြီးများနောက်များဆိုရင်စဉ်းစားကြပါဗျာ။
o funny sentence .... Rofl... Hmm... They wrote... I look like celebrity နောက်ဆိုရင်တော့ ဝေဖန်ရေးကန် တွေကို လျော့မှပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့ sub-domain နဲ့ဆိုတာတော့မကောင်းဘူးလိုမြင်တယ်။
ဒိုမိန်းမ၀ယ်နိုင်လို့နေမှာပေါ့ဗျာ .. ဒါမှမဟုတ် သီးသန့် လုပ်ပေးမယ့် Developer များ မရှိလို့လား .. နိုင်ငံခြားက လူတွေ က မြန်မာ့ အကောင်းဆုံး ဆုရ ၀က်ဆိုက်ဆိုပြီး ၀င် ကြည့် မိလို့ ကတော့ ... ဟင်းဟင်းဟင်း ...မြန်မာတွေ ဒိုမိ်န်း မ၀ယ်နိုင်ဘူး ဆိုဘူး လာလှူနေမှ သောက်ရှက် .. MZ က member တွေ မြန်မာ့ တစ်နှစ်တာဆု ရ ဆိုက် အတွက် ဒိုမိန်း လှူ ကြရအောင်လားဗျာ
ဟုတ်ပ mz မှလျူတန်းသည်ဆိုပြီးတော့လေ..မလုပ်ပါနဲ့ငိုနေပါဦးမယ်
all my admirable ones
I hope more positively , well-effective suggestions will come out about with Award ...
ကြည့်ရတာ တော်တော်များများ ၀င်မပြိုင်ကြဖူးထင်တယ်
နောက်နှစ်တွေမှာတော့ ဒီထက် ဒီထက် ပိုတိုးတက်လာမယ်လို ့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဗျာ
ဝင်ပြိုင်မှပေးမယ်ဆို နောက်နှစ်လည်း ဒီအတိုင်းပဲထွက်လာမှာပဲ
အခု နှစ်ကော ဘယ်သူတွေ ရသွားလဲ ဗျ . တကယ်မသိလို့ မေးတာ . တောထဲ ရောက်နေတာကြာတော့ . . မြန်မာ အိုင်တီ လောက ဘယ်လို ဆိုတာကိုတောင် မသိတော့ပါဘူး .
ဘယ်သူတွေ ပြိုင်လို့ ဘယ်သူတွေ ရသွားလဲ ဟင်
ဒီနှစ်ကတော့ ဘယ်ဆိုက်တွေ ဝင်ပြိုင်ပြိုင် ရတနာပုံ ပေါ်တယ်ကလွဲလို့ကျန်တာရမှာမဟုတ်ဝူး